Gịnị ka drivetrain pụtara na igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bike drivetrains - akwukwo zuru oke
Bike drivetrains - akwukwo zuru oke
Kedu ihe ụgbọ oloko pụtara na igwe kwụ otu ebe?
Ihe 'ụgbọala'nkeigwe kwụ otu ebendị mejupụtara niile ibe n'ibe na ị na-asọ (ma ọ bụ sere) naigwe kwụ otu ebetinyere. Ihe ndị bụ isi bụ pedal, cranks, chainrings, chain, cogs (cassette) na derailleur.
Anyị anyịnya igwe ga-eme ka anyị na-ede na gburugburu 2 mph, ma anyị nwekwara ike na-aga downhill dị ka 50 mph otú anyị chọrọ dị iche iche Kwadobe maka na na dị ka ị pụrụ ịhụ na igwe kwụ otu ebe m na anyị nwere yinye guzobere n'ihu na abụọ yinye na ọtụtụ anyịnya igwe nwere abụọ ma ọ bụ atọ olu, ma ụfọdụ anyịnya igwe nwere naanị otu na ha dị mma maka ezigbo onye na-agba ịnyịnya na-aga n'okporo ụzọ na mgbe azụ anyị nwere cassette a na nke a bụ ọsọ 11 a, mana anyị nwere ike ime ihe ọ bụla site na 5 ruo 11-speed - Bikes nwere, kedu ka ụgbọala a si eme anyị? Ihe buru ibu n’azụ, igodo ahụ na-adị mfe, dịka ị pụrụ ịhụ mgbe m bidoro. Ee, nke a bụ ihe kachasị mfe na igwe kwụ otu ebe m, ọ dị mfe ma nke a ga-ewe m 15 pasent site na ugwu ahụ, yabụ na nke a ga-abụ obere ihe n'ihi na enwere m nke kachasị na cassette na nke kacha nta n'ihu n'ihi na ọ na-arụ ọrụ ahụ ụzọ ọzọ gburugburu ebe a na ebe ahụ, mgbe achọrọ m ya dị ka ịnyagharị n'ugwu ahụ na achọrọ m nnukwu ọsọ na igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ, m gafere na nke obere na nke nnukwu nnụnụ m na azụ. n'ihu na dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, wiil ahụ na-atụgharị ugbu a ngwa ngwa n'ihi na m nwere nnukwu ihe mgbochi m na obere na azụ, n'ezie, enwere m ike ịgbada gaa na iri na otu gia nke na-arụ ọrụ ma ugbu a ajụjụ bụ olee otú ndị derailleur ọrụ Agbanwe Agbanwe bụ n'ụzọ bụ isi a mara mma ezughị okè imewe, ma ọ ka na-arụ ọrụ anyị anyịnya igwe dị ka nke a. Ndị a derailleurs dị ka n'azụ derailleur na abụọ ndị a obere wiil na derailleur ha dị nnọọ akpali anyị yinye yinye ala r na yinye set elu ma ọ bụ ala ma ọ bụ ihu elu azụ nke cassette na nke a nwere ike nnoo site abụọ agha, otu ike bụ naanị mkpịsị aka anyị na ndị ọzọ ike bụ ike nke mmiri na azụ derailleur, ma ọ bụrụ na anyị na-ele anya ebe a ị nwere ike ịhụ isi iyi ebe a na onye ọzọ na derailleur enwere m olile anya na ị ga-ahụ ya nke ọma ka anyị wee gbanwee mkpịsị aka anyị na mkpịsị aka anyị dịka ị nwere ike ịhụ ebe a ma site na h gear mgbanwe anyị na-enwekwa obi mmiri na derailleur anyị nwere ike ịhụ derailleur h ere enwere m otu nke ochie XT ochie ochie Mgbe m gbanwere gia, m dọpụta waya ahụ, na-agbakwunye na derailleur na derailleur na-agbanwegharị m, ma mgbe m laghachiri mgbe m chọrọ ịkwatu, onye derailleur na-eme ya site n'onwe ya n'ihi oge opupu ihe ubi nke dịkwa na derailleur, nke pụtara na ike nke derailleur ahụ na-arụ ọrụ megide ike nke mkpịsị aka anyị site na ịdebe ụgbọala anyị na wires dị ọcha nakwa na ịtọ ntọala derailleur n'ihu nke ọma anyị na-eme ka nnyefe ahụ dị ezigbo mma ma sie ike maka anyị ma belata ihe ize ndụ nke imebi ụgbọala anyị dị ka ndọtị agbụ ma ọ bụ ọbụbụ nke mgbapu nke ụgbọala derailleur n'ihu na m ga-ekwu maka ihe nkedo ndị a niile na otu esi enweta Waya ahụ na-emekwa ka ụdị eriri ahụ sie ike. Ekwesịrị iji maka ndị levers mee ihe kachasị mma, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro ọzọ biko hapụ Si Ka m gwa m n'ihe ndị a n'okpuru, m ga-ahụ gị n'oge na-adịghị anya n'isiokwu na-esonụ bye-bye
Ogologo oge ole ka ụgbọ okporo ígwè na-adịru?
Na-atụ anya n'etiti 1,500 na 3,000 kilomita site na 10-ọsọ yinye. Ọ na-enyere aka ịmepụta ihe dị ka 'ike gwụrụ'. A na-eyi agbụ zuru ezu iji metụta arụmọrụ nnyefe mgbe ọ gbatịpụrụ site na 0.75% mana ọ nwere ndụ ụfọdụ fọdụrụ ma ọ bụrụ na agbara ogologobụnzube, nke ikpe yakwesịrịkwesịrị ka edochie ya ma ọ gbatịkwuo 1%.Ọnwa Ise 10, 2016
mmemme igwe kwụ otu ebe
Akụkụ ndị mejupụtara gia gị na-aka nká na ọnụọgụ dị iche iche ma baa uru iji dochie ha ka ha na-echekwa gị nnukwu ego na ogologo oge. Worn Parts Degrade Other Parts Ugbu a ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na eyi ochie, unyi drivetrains n'ezie na-eche ihe jọgburu onwe ha kwa ha na-akpa na mushy, ebe dị ọcha, crisp ịgbanwee si n'ọnọdụ dị mma 1 na-eme ihe ochie igwe kwụ otu ebe dị ka ihe ọhụrụ, yabụ kedu ka ị si mara mgbe a na-edochi akụkụ ahụ nke ọma? Ka anyi buru uzo malite na ihe ozo maka na nke ahu bu nke inwere. Ekwesịrị m iji dochie ya ọtụtụ oge, ọ bụ nke na-ebu ụzọ wepụta ya na ime nke a ọ na-amalite ịgwụ na casset gị na ihe olu na ha na-agbadakwa ngwa ngwa.
E nwere ụzọ abụọ iji mee nke a. Nke mbụ bụ ịtụle ọtụtụ njikọta na ịnwere ike ịnweta ngwa ọrụ edoziri maka ọrụ nke nwere ike ịbụ ihe mara mma, nke bụ naanị otu mpempe ígwè ma ọ bụ plastik ị na-agbanye na yinye na mgbe ọ na-eyi ya, ọ na-anọdụ ala na agbụ ebe a Ọ bụ kpọmkwem otu esi eyi ya, ọ bụrụ na ọ bụ 0,5 mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu mana ị kwesịrị iche maka ya ma ọ bụrụ na ọ dabara na ihe 7 5 ọ bụghị ma ọ bụrụ na ịnweghị otu n'ime ngwaọrụ ndị ahụ akọwapụtara You nwere ike kama ịlele njikọ ahụ nke mere na njikọta asatọ zuru ezu dị sentimita asatọ na ị nwere ike ịhụ n'ụzọ nkịtị ịgbatị oge ma ọ bụrụ na ọ gafere otu ụzọ n'ụzọ iri karịa asatọ ị ga-etinye ya Repgbanwe ụzọ ochie nke abụọ dị ezigbo mma, tinye ebe a nnukwu mgbanaka ma gbalịa n'ihu ihu n'akụkụ ma bulie agbụ ahụ site na ringson a dị mma nweta A yinye dị ka nke a, ị nwere ike ịhụ ihe ọ bụla, mana ka agbụ ahụ na-agbatị, ị nwere ike ịhụkwu ihe ntanetị, ọ bụrụ na ịnwere ike ibuli ya enwere onwe gị otu oge ọ bụ oge rep kpachie ya ugbu a ka ọtụtụ agbụ nwere ike ịkwụsị n'agbata kilomita atọ na ise ma ọ bụ ihe dịka puku kilomita abụọ ma ọ bụ atọ, mana ọ dabere na ọnọdụ ị na-anya, otu ị si elekọta mkpali gị na ike ị tinyere, asịrị ahụ bụ na ala gbadara agbụ ya ga-agbanwe mgbe ọ bụla onye na-agba Ọ bụrụ na ị na-agbanwe agbụ gị mgbe niile mgbe ahụ, ihe nkedo gị kwesịrị ịdịru ogologo oge, mana ị ka kwesịrị ilezi anya maka ihe ịrịba ama nke ejiji, dị ka otu usoro iji chọpụta ugbu a bụ mgbe ezé dị na mgbanaka ahụ malitere ịdị ka ndị obere Inweta ezé ezé ezé ejide ma nke ahụ bụ ihe ngosipụta dị mkpa ịchọrọ iji dochie agbụ gị, mana ọ bara uru ịkọba na ụfọdụ ezé na-adịkarị iche iche karịa ndị ọzọ, ha dị obere na nke ahụ bụ imewe nke pụtara na ọ na-enyere aka na ngbanwe.
Mee ka eriri olu gị nwee ike ịhazigharị ga-adị ogologo oge ma ọ bụrụ na ị na-edochi anya gị oge niile, mana ọ ga-aka nká ugbu a. Otu n'ime ihe ịrịba ama pụtara ìhè nke cassette mpụga bụ na ọ bụrụ na ị na-egwugharị gears, mgbe ị gbanwere usoro gị, ọ nwere ike ime na ntaneti ma ọ bụ abụọ ị na-etinyekarị oge gị, mana ị ka ga-ahụ onwe gị na-ezo ma ọ bụrụ na nke ahụ emee ugbu a ị ga-eji dochie cassette niile, nke bụ ihe ọzọ mere na ị gaghị agbanwe agbụ ahụ n'abalị ahụ tupu ihe omume dị mkpa dị ka agbụrụ ma ọ bụ egwuregwu - ọ dị ntakịrị oge, ị nwekwara ike ịzụta A na-ahazi ngwa ọrụ akpọrọ iji gosi ma katrij gị agwụla, mana anyị onwe anyị agaghị ekwu na enwere ọtụtụ cartridges dị iche iche na ọ naghị adaba na nke ahụ bụ mgbe ịzụta bụ na-anwa ịda ụda ya ma ọ bụ na ọ bụghị n'ezie dinara ala, ị na-etinye breeki azụ gị ma pịa pedals siri ike ma ị ga - ahụ ma ọ bụrụ na agbụ ahụ dị na casset gachara, ọ na - egosi na ọ dị. eyi, anyị enweghị ike imesi ike mkpa ọ dị idebe ihe, m na-ekwu, mgbe a ọhụrụ yinye efu 20 ma ọ bụ 30 pound ordollars na a ọhụrụ ikpe yinye-akwụ ụgwọ abụọ na narị atọ, ị pụrụ ịhụ ya n'ụzọ doro anya site na akụ na ụba echiche na nke bara uru ma na-ejuputa eriri ọhụrụ dị mfe, mgbe anyị nwesịrị isiokwu banyere otu esi eme ya na nchịkọta mgbe ahụ ịchọrọ ịgbanwe igwe gị mgbe niile ma ọ bụrụ na ịnwere ike iwepu njikọ ole na ole na-agbụ gị mgbe ahụ ịchọrọ nwere ihe ọhụrụ na-adọrọ adọrọ mgbe ọ malitere dị ka otu ahịrị ezé shark mgbe ahụ ị ga-agbanwe katrij gị, ma ọ bụrụ na ọ na-awụli ma ọ bụrụ na ị nwere agbụ ọhụrụ ma ọ bụ karịa nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnwale ya na nkwụsị ọrụ ma ị hụ na enwere oke ọtụtụ ije site na ịlele m emeghị nke ahụ iji nweta isiokwu banyere otu esi agbanwe igwe gị, pịa ebe ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma etu esi agbanwe igwe gị na-agbanwe cassette, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta ya ebe ahụ, mgbe ahụ n'ikpeazu noro na ihe omuma anyi nile dika i debanye aha ya y n'efu, pịa m
Ogologo oge ole ka MTB ụgbọala na-anọru?
Na mmezi kwesịrị ekwesị aigwe kwụ otu ebenwere ikeikpeazụihe karịrị afọ 20. Oge a dabere nke ukwuu ebe ị na-agba ịnyịnya na ego ole ị na-agba. Itemsfọdụ ihe ga-aka nká, taya, ụdọ ígwè, ihe mkpuchi breeki natratrainsagaghịikpeazụrue mgbe ebighebi. Abịa n’ogologo ndụ nlezianya bụ ihe niile.
(Chain rattle) (nwoke sighs) - chere, ka m tinye yinye n'olu m ugboro abụọ (obi ụtọ music) (gia rattle) (metal rattle) be the newest drivetrain added another gear. Mana maka iwe ahụ niile, lee anyị nọ na 2020 na njedebe 12 na azụ igwe kwụ otu ebe. Abụ m Mike Levy na onye nkọwa taa anyị ga-ekwu maka ihe niile gbasara nkuzi iri na abụọ.
Kedu ihe kpatara hel anyị nwere gia 12? Kedu ihe dị iche na etiti 11 na 12, ma e wezụga naanị otu pịa na gia. (Obi ụtọ dị ụtọ) M ga-asị ka anyị gbanwee gaa gia wee gawa? Tupu egwu 2012, ọtụtụ n'ime anyị nwere derailleurs na abụọ ma ọ bụ atọ yinye n'ihu anyịnya igwe. Mgbe ahụ, na 2012, SRAM malitere 11-ọsọ XX1 ha.
Ma nke ahụ bụ oge mbụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ụgbọala na-enyekarị omenala nke otu mgbanaka mgbanaka ụgbọala. Ọfọn, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ echiche ndị SRAM jiri weta 11-ọsọ XX-One drivetrain na ndụ, anyị jikwa eme ka 12-ọsọ nwee ike.
Ihe ndị dị ka derailleur nke emepụtara n'ụzọ pụrụ iche ma ọ bụ maka otu oghere na-agagharị agagharị nke kwere ka casset 10- ruo 42 dị na mpaghara 420%. Ma nke kachasị mkpa, profaịlụ warara nke dị warara nke na-enye aka na-enye aka idobe agbụ a na otu mgbaaka. 11-ọsọ XX1 dị ihe dị ka afọ anọ mgbe SRAM kwalitere ụzọ ọsọ ọsọ 12 ya n'okpuru aha 'Ugo'.
Ugbu a, ọ nyere ihe dị nzuzu 500% maka oge ahụ, site na cassette nwere akwa 10 na ezé 50. Nke ahụ bụ 80% ọzọ. Mba, ee.
Nke ahụ bụ 80% karịa 11 gia XX1 nke bịara n'ihu. 80%. Ọ pụtara na ọ bụ 80%, 80% nke oge.
Ọ dị mma mgbe niile. Ngwa ngwa ngwa uche. Yabụ kedu ihe ọkụ mmụọ Shimano na-eme n'oge ihe a niile? Ọ dị mma, echere m na ha rụrụ ọrụ obere oge na ndị na-agba ọsọ n'ihu ha, ọ were ha ruo 2018 iji weta otu mgbanaka ha nke 12-speed drivetrain, XTR M 9100, n'ahịa.
Dị ka SRAM ga-ewepụta ụfọdụ echiche aghụghọ iji rụọ ọrụ ya, Shimano kwesiri ime otu cassette ahụ na 10 - 51-ezé ezé, derailleur azụ maka otu ringtrain ụgbọala, na akụkụ ndị ọzọ niile a tụrụ anya. Mana ikwesighi itinye $ 2,000 ma ọ bụ ihe ọ bụla iji nweta draịntị ọsọ ọsọ 12 dịka Dior, NX, na ndị ọzọ. Yabụ enwere nhọrọ ndị ọzọ ebe ahụ.
Ọzọkwa, ekwesịrị m ịkọwa na enwere ndị nrụpụta akụrụngwa ndị ọzọ nọ ebe ahụ na-enye ụdị ike mgbakwunye mgbakwunye, mmezigharị derailleur, na ihe ndị yiri ya iji gbasaa elu. Maka edemede a, anyị na-arapara n'ahụ nnukwu egwuregwu abụọ SRAM na Shimano (egwu rhythmic). Yabụ kedu ezigbo ọdịiche dị n'etiti ọsọ 11 na ọsọ ọsọ 12, ewezuga nke doro anya nke bụ pịa na gia? ezu ihe abụọ dị mkpa na ụfọdụ obere akụkụ.
Ka anyị kwuo banyere nso nso, nke mbụ. Mgbe a gbahapụrụ ọsọ ọsọ 11, sistemụ nke XXAM nke SRAM, cassette ahụ nwere obere sprocket, ezé ezé iri abụọ na anọ, ugboro iri abụọ na iri anọ na anọ, ọnụọgụ 420% na-enweghị derailleur na ụdọ olu abụọ, oke gị sitere na cassette gị, cheta, na 420% enweghị ike 'ghara ijide ihe derailleur nyere, mana ọ na-apụta 12-ọsọ, 10-ezé obere gia, 50-ezé nnukwu gia, 10 ugboro 50, 500%, nke ka mma. Maka otutu mmadu, nke a na aru oru.
Amaara m na ị nọ naanị. Ọzọ, Achọrọ m ikwu banyere obosara obosara na ezé. Nke mbu, ka anyi gaghachigha anyi na uzo abuo.
Naanị maka echiche ka mma, ha dị milimita asaa n'obosara na rivet. Nke a bụ widest ebe na yinye. Ha dị milimita abụọ dị obere karịa otu ọsọ ọsọ.
Akara 9-ọsọ bụ isii na ọkara ruo asaa millimita. Ntinye 10-ọsọ bụ milimita isii n'obosara. Chains ndị ekwesịrị iji rụọ ọrụ na draịva 11 na-ebu ibu bụ 5.5 millimita n'obosara, agbụ ọsọ 12, ka emechara, ha dị 5.3 milimita n'obosara na rivet.
Ya mere, eleghị anya ị maara ihe mere ụdọ ndị ahụ ji na-ebuwanye ibu n’ihi na ha na-akụkwu otu ebe, nke pụtara na ihe ndị ahụ kwesịrị ịkpụ. Ọ dịkwa unu mkpa ibikọ ọnụ. Nke a dị ezigbo mkpa mgbe anyị na-ekwu maka obosara ogologo n'ihi na ezubere ha ka ha rụọ ọrụ na obosara doro anya, yabụ amaara m otu nwa okorobịa jiri akara 11 dị ọsọ na draịva iri na abụọ.
Ya mere, ihe nkedo a kwesiri ibu 0,2 milimita n'obosara. Ọ dị ka obere obere, ọ bụ obere obere, mana draịva anaghị adị mma.
Ọ na-adịkarị ka ihe dị na ntị ya ma mesịa mee ya obere ara. Ọ dịrịtụbeghị otu ahụ kemgbe ahụ, mana ị nwere ike ijikọ ọtụtụ. Amaara m otu nwa okorobịa ị tinyere otu n'ime ndị ahụ mara mma X-Dome, casset cassettes na igwe kwụ otu ebe ya, ha dị oke ọkụ, ihe igwe ndị ahụ, mana ọ chọrọ iji ihe XDR derailleur na XDR gbanye ya.
Ọ rụkwara ọrụ nke ọma. Amaara m onye ọzọ mere ihe yiri nke ahụ belụsọ na ọ bụ cassette XTR na XTR derailleur, mana ọ chọrọ iji ya na-ebugharị ebugharị a. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'oge ahụ, n'otu ebe na Chicago na ebe na Japan Japan, onye dị mkpa na-aga ihe na-eme, ha na-adị ka mkpagide ebe, ihe.
Ya mere, nkwupụta ikpeazụ, ihe a niile, ọ na-arụ ọrụ kachasị mma dị ka ebumnuche mgbe ọ na-ezukọta ịmepụta usoro okike. Yabụ na ihe ndị sere n’elu gị, draịntin gị ga - arụ ọrụ ọfụma mgbe ihe niile dị na nchịkọta SRAM gị na Shimano gị bụ naanị nchịkọta Shimano. Etinyela ha ọnụ.
Eleghi anya, gwakọta ha ntakịrị ihe ọ bụla (egwu Rhythmic) Ka anyị kwuo maka gịnị? 12 ọsọ nyere anyị. Kedu ihe kpatara ha ji na - agbakwunye gia ebe ahụ mgbe anyị niile na - arahụ onwe ha mgbe ha mere nke ahụ? Gịnịkwa mere anyị ji ruo mmadụ iri na abụọ? Gịnị mere anyị ji nwee gia? Azịza ya? Ọfọn ọ dị mfe. O nweghi ihe jikọrọ ya na ịwepụ atụmatụ, ịchụso.
Echere m na m kwuru ya n'olu dara ụda na ọ bụ, ma ọ bụ ụfọdụ nzuzo derailleur cabal ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke ahụ ga-abụ ọtụtụ ihe na-akpali. Ndị a bụ isi ihe kpatara anyị ji eji 12 rụọ ọrụ kama iji isii ma ọ bụ atọ ma ọ bụ asatọ ma ọ bụ 10.
Ihe mbụ anyị kwurula banyere ya bụ nso n'ihi na ịnweghị ihe mmebi iwu, oke ahụ ga-esi na casset gị. Ọ bụ ya mere ha ji amalite na 10 wee gbadata na 50 iji nye gị 500% gia ahụ. Ma ị nwere ike ịnọ na-eche ihe kpatara na anyị enweghị ike ịnweta casset ọsọ ọsọ isii ma ọ bụ asatọ ma ọ bụ ihe atọ ọ bụla? Cassette na-agba ọsọ nke nwere ụdị dịgasị iche ma ole na ole? Azịza ya nwere ihe jikọrọ ya na cadence.
O bu ihe nwute, ukwu anyi jikoo ụbụrụ anyi na ụbụrụ anyi choro ka ukwu anyi na agbaghari n'otu uzo nke di obere karia, anyi ga ekwu okwu banyere ugbo ala nke abuo. Carsgbọ ala ndị ochie nwere nnyefe ọsọ ọsọ atọ ruo anọ, ụgbọ ala ọhụrụ, ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ nwere ọsọ ọsọ 10. Ihe kpatara nke a bụ arụmọrụ nke injin ahụ na-agba ọsọ ọsọ iji chekwaa mmanụ ọkụ, kamakwa maka oke ọsọ na ọsọ gị.
In nọ n’aka nri, ị na-eme osooso ngwa ngwa, ọ bụkwa otu ihe ahụ ka anyị na ya. Ya mere ihe ọmụmụ 12. Have nwere ọtụtụ gia ịhọrọ, nke pụtara na obere jumps n'etiti gia.
Nke ahụ pụtara na ahụ anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ dị mma, ka emechara ihe a niile, gịnị ka ị chere maka draịva ọsọ ọsọ 12? otú ihe na-aga, ma ọ bụ na ị ga-kụrụ ịkwụsịtụ mgbe anyị asatọ cogs na-agba ọsọ, ka anyị mara na-aza ajụjụ n'okpuru. Ya mere (yinye clink) (egwu obi ụtọ)
Ego ole ka ọ na-eri iji gbanwee ụgbọ ịnyịnya ígwè?
The nkeziọnụahịankeigwe kwụ otu ebebụ 350 $ mgbe Shimano na SRAM na-enye nchịkọta nke otu maka ugwu na ụzọanyịnya igwena ọkwa dị iche iche bidoro na 120 $ ruo 1200 $.
2x ọ ọsọ karịa 1x?
Ná nkezi, a2xdrivetrain bụ 1% rụọ ọrụ nke ọmakarịa 1x. Gburugburu mbara ala-2xdrivetrains nwere ike inwe ihe karịrị 600% gear gear. Nta na-agbanwe agbanwe nzọụkwụ n'etiti gia- N'ihi na e nwere ọtụtụ Kwadobe na nso, na pasent mgbanwe site na nke ọzọ nwere ike ịbụ nta.14wa 14 2021
1x ọ ka mma karịa 3x?
Nke ka eluọnụahịa - n'ozuzu, ezigbo mma1xgroupet akwụ ụgwọ ihekarịaa 2x, ma ọ bụ3xsistemụ nke yiri ya.Ukwuudrivetrain n'ibu ida - n'ihi na nke siri ike yinye n'akuku (cross-chaining) na ole na ole yinye ezé ụfọdụ gia n'ịgwa.Ọkt 18 2018
Kedu kilomita ole ka igwe kwụ otu ebe kwesịrị ịdị?
“Ọ nwere ike ịdị iche n'etiti 3,000kmruo 8,000kmn'ozuzu ikwu ya, mana yanwere ikebelata ma ọ bụ ọbụna karị n'ọnọdụ ụfọdụ. ” Nke mbu, ikwesiri igbanwe nke giyinyemgbe ị hụrụ mmebi ọ bụla (nrụrụ ma ọ bụ mgbape). Gịkwesịrịlekwaa nke giyinyemgbe niile ka ị mara ma ọ̀ ga-arụ ọrụ nke ọma na ị ga-agbanwe ya.Ọnwa Ise 16, 2020
Kedu ka m ga-esi mara ma igwe igwe ịgba ịnyịnya ígwè m na-eyi?
Atụyinye ihe ahufree na mfe ụzọ
Dọọihe olu ahunaihen'ihuihechainring dị ka egosiri.Ọ bụrụ na yinyeamalite ibuli eluiheelu na / ma obuiheala ebe osiri diihesiling ezé, nke a pụtara naihe olu ahuna-amaliteeyima obu bueyi.Ọ bụrụ na gị yinyeebuli eluiheyiri nke a, ọ ga-abụeyi.Ọgọst 27 2019
Ogologo oge ole ka ị kwesịrị idobe igwe kwụ otu ebe?
Iji chịkọta ihe, aigwe kwụ otu ebega-enwe ndụ nke ihe dị ka afọ ise na-agba ịnyịnya kwa ụbọchị tupu a gbasaa ya. Enwere ike ịgbatị ndụ a ruo mgbe ebighị ebi site na ihe ọhụrụ na ịdị uchu na-arụ ọrụ (ma ọ bụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na ọ dị njọ).
Ugboro ole ka m kwesịrị ịgbanwe igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu m?
Ijizere nke a accelerated eyi nkenke gicassette na yinye, iwu izugbe akadochie igwe kwụ otu ebe gịagbụ kwa 2,000 kilomita. Mara, nke a bụ mbido. Ọ dịghị agbụ abụọ ga-eyi otu ihe n'ihi na ọ dịghị ndị na-agba ịnyịnya abụọ ga -aga otu agbụ.bọchị 2020
Ebee ka ụgbọ okporo ígwè dị na igwe kwụ otu ebe?
Nke a bụ ihe dị iche iche mejupụtara ụgbọala ahụ: Na-enweghị crankset, igwe kwụ otu ebe agaghị enwe ụzọ isi na-aga n'ihu. N'ozuzu dị n'akụkụ igwe kwụ otu ebe, crankset bụ ebe pedal ga-agbakwunye na igwe kwụ otu ebe. Ọ bụghị cranksets niile bụ otu na ha nwere ọnya dị iche iche na-etinye na akụrụngwa.
Kedu otu sistemụ draịntin siri jikọta na akụkọ igwe?
Akụkọ ihe mere eme nke sistemụ ụgbọ ịnyịnya ígwè nwere njikọ chiri anya na akụkọ ihe mere eme nke igwe. A na-ebute mbido mgbanwe n'ụdị igwe ma ọ bụ soro ya site na ọganihu na sistemụ ụgbọala. Ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè n'oge gboo na-agbatị ibe ha n'ụzọ kwụ ọtọ na ibe ha n'èzí hub.
You chọrọ 1x drivetrain maka ugwu igwe kwụ otu ebe?
Ọ dị mma ọ dị mfe - obere ihe na-ezighi ezi na obere ejiji na components. 1x nwere mmetụta dị ukwuu maka ndị na-agba ịnyịnya ugwu ọhụrụ dịka ọ dị maka MTB’ers nwere ahụmahụ. Omume a emeela ụzọ ya gaa Adventure Road / Gravel Bikes dị ka ndị na-anụ ọkụ ọkụ na-atụgharị anya iji mee ka ntọala ha dị mfe ma chekwaa ibu. Ọ dị oke ọnụ?